बेडमा पल्टिने बित्तिकै भुसुक्कै निदाउनुहुन्छ ? यो लक्षणलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
बेडमा पल्टिने बित्तिकै भुसुक्कै निदाउनुहुन्छ ? यो लक्षणलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् !!
निकै छिट्टै निद्रा लाग्नु स्लीप डिसअर्डरसँग पनि जोडिएको हुनसक्छ । यदि तपाईं राती ६ घण्टा पनि कम सुत्नुहुन्छ भने तपाईंको शरीरले पर्याप्त निद्रा पाइरहेको छैन भनेर बुझ्नुहोस् । यसैकारण पनि तपाईंलाई जतिबेला पनि निद्रा लागिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ । खानपिनजस्तै तपाईंको शरीरलाई पनि निद्रा त्यति नै आवश्यकता पर्छ । विशेषज्ञका अनुसार जसको निद्रा पूरा हुन पाउँदैन उनीहरुमा मधुमेह, मुटुरोग, मोटोपना, उच्च रक्तचाप र डिप्रेशनको खतरा बढ्ने गर्छ । रातोपाटी बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 60 = 70